किन हार्यो परिवतर्नकारी शक्ति ? - Karobar National Economic Daily
किन हार्यो परिवतर्नकारी शक्ति ?
query_builderJune 2, 2017 10:51 AM supervisor_accountहुम सुनारी मगर (हाल साउदी अरब) visibility1383
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव, प्रादेशिक र संघीय चुनावपछि नयाँ संविधान पूर्ण रूपले कार्यान्वयन भएको ठहरिनेछ र मुलुकले समृद्धिको गन्तव्य समात्नेछ । तथापि, संविधानमा मधेसी र जनजातिहरूका छुटेका थप राजनीतिक मुद्दाहरू संशोधन हुन भने अझै बाँकी छन् । संशोधनबिना स्थायी शान्ति कायम हुन गाह्रो हुनेछ ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको नायकका रूपमा कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला र कम्युनिस्ट नेता पुष्पलाललाई मान्न सकिन्छ । तर, तिनका उत्तराधिकारीहरूले पटक–पटक नेपालको संविधान लेखे पनि तिनीहरूमा दूरगामी सोचको अभाव भएको विगतका संविधानहरूले प्रमाणित ग-यो ।
तानाशाही निरंकुश राजतन्त्रलाई जनयुद्धबाटै विस्थापित नगरे पनि नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य सात पार्टीको गठबन्धनसँग १२ बुँदे सहमति गरेर निर्णायक आन्दोलन गरियो । १२ बुँदे सहमतिबमोजिम विद्रोही दल नेकपा माओवादीले बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने र सातदलीय गठबन्धनले संविधानसभाको चुनावलाई स्वीकार गर्ने सहमतिअनुसार आज मुलुक यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ ।
राजसंस्थालाई सदाका लागि खारेज गरिँदा तत्कालीन माओवादी पार्टीले यसलाई सबैभन्दा ठूलो विजयका रूपमा उत्सव नै मनाएका थिए । तर विडम्बना, पहिलो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान आउन सकेन । सहमतिकै आधारमा नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा भएकाले तोकिएको अवधि चार वर्षभित्रमा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेन । दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी हुन सक्ने व्यवस्था भएको भए पहिलो संविधानसभाबाटै प्रगतिशील र समावेशी संविधान जारी हुन सक्थ्यो ।
दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि माओवादीको आकार अनपेक्षित रूपमा खुम्चियो । पहिलो संविधान सभाबाट संविधान आउन नसक्नुमा अन्तरिम संविधान नै प्रमुख कारक हो भन्ने आमनेपाली जनताले बुझ्न सकेनन् र माओवादीले बुझाउन पनि सकेन ।
दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान, २०७२ जारी भयो । पक्कै पनि नयाँ संविधानको विशेषता आंशिक रूपमा परिवर्तनशील र प्रगतिशील छ । नयाँ संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता उपलब्धि र परिवर्तनलाई समेटेको छ । यी एजेन्डाहरू कांग्रेस एमालेका होइनन् भन्ने इतिहासले प्रमाणित गर्छ । समग्रमा माओवादी, मधेसी र जनजातिहरूले उठाएका एजेन्डाहरू आंशिक रूपमा भए पनि उपलब्धिकै रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध भएकै छन् ।
गणतन्त्र कांग्रेस–एमालेको मुद्दा थिएन । त्यो पनि इतिहासले प्रमाणित गरेको छ । तत्कालीन माओवादीले प्रस्तुत गरेको ४० सूत्रीय मागप्रति कांग्रेस–एमाले उतिबेलै सकारात्मक भएको भए आज देश धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो । माओवादी युद्ध हुँदैनथ्यो ।
माओवादीले गणतन्त्रकै लागि सशक्त संघर्ष गरिरहँदा कांग्रेस–एमालेले सत्ताकै लागि राजालाई दाम चढाएर बिन्तीपत्र पेस गरेको पनि इतिहास साक्षी छ । माओवादी र तत्कालीन सात पार्टीको गठबन्धनले १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन गरिरहँदा एमालेकै वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीले ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन’ भनेर ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनलाई व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति दिएको पनि सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ ।
मुलुक आज माओवादीले उठाएको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता मुद्दाहरूका साथ अगाडि बढेको छ । यसैका आधारमा नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको स्थानीय तहको प्रथम चरणको चुनाव पनि सकिएको छ । मत परिणामले मुलुक परिवर्तनका लागि माओवादीले प्रस्तुत गरेको सबै मुद्दाहरूलाई आमनेपाली जनताले स्वीकार गरेको बुझियो ।
तर, स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावबाट माओवादीलाई तेस्रो स्थानमा सीमित गरेर मुलुक परिवर्तनका वाहक माओवादी केन्द्रलाई जनताले न्याय गरेको देखिएन । यसको कारण माओवादीको आन्तरिक पनि हो र प्रमुख कारण अहिलेको परिवर्तन र राजनीतिक उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न कसरी सम्भव भयो भन्ने आमजनताले थाहा पाउन नसक्नु पनि हो । माओवादी फुट्दा माओवादी आन्दोलनको उपलब्धि र परिवर्तनलाई आघात पु-याएको छ ।
माओवादी स्थानीय तह चुनाव ओवादी